Isiphelo sika-Apple e-UK: Ngaba sinokunyamalala ngaphezulu kwesigwebo 'esingamkelekanga kwezorhwebo' IPhone iindaba
Ingelosi Gonzalez | | Ukhuphiswano, Izaziso
Las lungelo Bahlala beyindawo yokuzalela iinkampani ezinkulu ukuba zingene kwizityholo ezinzulu zemithombo yeendaba ezithatha ingqalelo yamajelo eendaba. Ungquzulwano olukhulu lokugqibela luse-United Kingdom apho I-Optis yeTekhnoloji yeselula imangalele iApple ngokusebenzisa itekhnoloji enxulumene nokunxibelelana neenethiwekhi ezihamba nexabiso eliza kuthi lifike iibhiliyoni ezisixhenxe zeerandi. Enyanisweni, UApple usoyikisile ngokususa zonke iimveliso zase-UK njengesigwebo 'esingamkelekanga kwezorhwebo'.
Isongelo sika-Apple sokunyamalala e-UK: ukukhohlisa okanye inyani?
El Unyango Ibuyela emva kwiinyanga ezininzi kodwa iindaba zamva nje zivela kwiNkundla ePhakamileyo yase-UK. Ekupheleni kwenyanga ephelileyo, I-Apple yaziswa ukuba iphule amalungelo awodwa omenzi wechiza I-Optis yeTekhnoloji yeselula. Ezi patents ziqulathe itekhnoloji evumela i-iPhone ukuba iqhagamshele kwiinethiwekhi ze-3G kunye ne-4G. Le mpikiswano inye yezobuchwephesha yamalungelo awodwa omenzi wechiza yayisele izamile eMelika. Kodwa ekugqibeleni ityala laphoswa ngaphandle kuba ijaji "yayingcolisiwe bubuchwephesha." Kwiinyanga kamva, uOptis wabuyela e-United Kingdom ukuba aphinde athabathe amanyathelo asemthethweni nxamnye ne-Apple kwakuloo ngxaki inye.
Ityala liyaqhubeka kuba iApple ibinqabile ukuhlawula umrhumo welayisenisi yamalungelo awodwa omenzi wechiza ye- $ 7 yezigidigidi. Kungenxa yokuba bayithatha 'njengeetekhnoloji esemgangathweni' kwiimveliso zabo kwaye ayihambelani nayo nayiphi na i-Optis patent. Nangona kunjalo, iApple iyahlala injalo kwaye ayizimiselanga ukuhlawula elo mali ngolwaphulo mthetho abakholelwa ukuba aluzange lwenzeke.
Ukuncitshiswa kwekhomishini yeVenkile ye-Apple kuchaphazela i-98% yabaphuhlisi
Into ebaluleke kakhulu kwimeko leyo la isigwebo seNkundla ePhakamileyo yase-United Kingdom inokubeka isohlwayo sezigidigidi ngokugubungela konke ukophula umthetho kwelungelo elilodwa lomenzi kwihlabathi liphela. Kwaye yile nto ikhathaze iiofisi zaseCupertino Basongele ngokunyamalala e-UK ngesigwebo 'esingamkelekanga kwezorhwebo'.
Kucacile ukuba iApple ayizimiselanga ukuyeka ukuthengisa iimveliso zayo e-UK. Kodwa into ecacileyo yeyokuba isohlwayo sezigidigidi sinokuba sisibetho esikhulu kumgangatho weCupertino. Ukongeza, impikiswano inokudlulela nakwiinkundla zesiqingatha sehlabathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Apple Ultimatum yase-UK: inokunyamalala ngaphezulu kwesigwebo
I-Apple ikhupha iBeta eNtsha yeKhayaPod 15 yeSoftware ukulungisa ubushushu
Ungawutshintsha njani umfanekiso weprofayile ye-Apple